Oggolaanshaha Shaqada - Milyaneyaasha Wax Sameeya
Fasaxyada Shaqada ee
Waxaan ka taageernaa Shakhsiyaadka iyo Shirkadaha sidii loo heli lahaa fursado iyo murashaxiinta, siday u kala horreeyaan ka dib marka la adeegsanayo iyo dhameystirka nidaamka.
Waxaan ku kobcinaa macaamiisheena dulqaad iyo naxariis badan.
Waxaan u bixinaa xalka loo habeeyay shaqsiyaadka / qoysaska / ganacsatada yar yar / shirkadaha ugu waa weyn adduunka ee sida ugu fiican ugu shaqeynaya iyagoo kaa taageeraya dhammaan baahiyahaaga socdaalka
Nala wadaag shuruudahaaga annana waan ku hanuunin doonnaa sida., Adduunka oo dhan.
Ka baadi Gobolka
Taageeradeenna cad, oo kooban oo shaqsi ahaaneed, waxaad fahmi doontaa doorka aad ku leedahay geeddi-socodka socdaalka waxaadna ogaan doontaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad adiga iyo qoyskaaga ugu kaxeysaan gurigaaga cusub sida ugu dhaqsaha badan. Xitaa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah soogalootiga badanaa way adagtahay in la fahmo — waligaa ha ka fikirin xuduudaha qorshooyinka soogalootiga ee isku dhafan. Haddii aad isku aragto inaad ku dhex luntay badweynta sharciyada iyo qawaaniinta socdaalka, Milyan sameeyayaal ayaa fududeyn doona. waxaan sameyn doonnaa dhib badan, mid toos ah oo fudud, maadaama aan isku dayi doono inaan kugu hagno adiga iyo qoyskaaga shuruudaha socdaalka ee wadankaaga cusub. Taageeradeenna kooban, oo cad oo la habeeyay, waxaad ku fahmi doontaa doorka aad ku dhex leedahay howlaha socdaalka waxaadna aqoonsan doontaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad adiga iyo qoyskaaga ugu kaxeysaan gurigaaga cusub sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan habka ugu wax ku oolka badan.
Mararka qaarkood shuruudaha socdaalka ee aad u fudud ayaa adkaan kara in la fahmo, laakiin, ha walwelin astaamaha qorshayaasha socdaalka ee labada dal ka socda. Haddii aad ku aragto inaad ku weyday badweynta xeerarka socdaalka iyo qawaaniinta, Milyan-yaqaaneyaasha ayaa fududayn doona. Waxaan kuu fududeyneynaa sida ugu fududaan ee fudud maadaama aan leenahay u janjeera inaan ku hagno adiga iyo qoyskaagaba shuruudaha socdaalka ee dalkaaga cusub.
Caawinaadeena cad, fududaan, garsoorid, gogol xaar ah iyo taakuleyn shaqsiyeed, waxaad xaqiiqdi fahmi doontaa doorkaaga ku aadan howsha socdaalka waxaadna fahmi doontaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad adiga iyo reerkaagaba ugu keento gurigaaga cusub sida ugu dhaqsaha badan ee lagu gaadhi karo.
Xulashada fursadaha ugu wanaagsan / Xulashada si loo gaaro hanashada guusha Yoolalka iyo ujeeddooyinka.
24/7/365 helitaanka dacwadahaaga meel kasta oo adduunka ah.
Helitaanka shuruucda socdaalka ee cusub, xeerarka iyo wararka.
Haddii aad haysato baahi sharci oo badan oo dowladeed ama aad raadineyso kaalmo ku saabsan soogalootiga dal aad u cad ama gobol, Million Makers ayaa kaa caawin doona inaad si aan kala go 'lahayn u maamusho dhaqdhaqaaqa shaqaalahaaga / shaqaalaha. Waxaa loogu talagalay inay kaafiso shuruudahaaga ee taageerada dhammaystiran, adeegyadeena baaxadda weyn ee oggolaanshaha shaqada iyo adeegyada oggolaanshaha ayaa fududaynaya in la hubiyo in nidaamka loo hoggaansamo sharciyada socdaalka iyo qaanuunka.
Adeegyadan waxaa ka mid ah:
Diyaarinta dalabka iyo xereynta shaqada kumeelgaarka ah iyo ruqsadaha deganaanshaha, fiisooyinka soo gelitaanka, ogolaanshaha soo gelitaanka iyo arrimaha soogalootiga.
Caawinta arrinta Visa.
La-talin ku saabsan nidaamka soo galitaanka iyo bixitaanka.
La-talin ku saabsan habsami u socodka amniga iyo nadiifinta caafimaadka.
La-talinta kiisaska qalafsan, oo ay ku jiraan taageerada iyo u-qareemeynta hay'adaha dowladda.
Talo soo jeedinta ku saabsan xubnaha fiisaha iyo xubnaha qoyska fiisaha, awooda lagu muujiyo arrimaha, arrimaha ardayda la xiriira iyo hagaajinta jiritaanka iyo heerka.
Kooxdayada xirfadlayaal khibrad leh oo khibrad leh ayaa waqti qaata si ay u fahmaan himilooyinka ganacsiga shirkaddaada, yoolalka hijrada iyo socdaalka. Waxay si furan ula wadaagayaan adiga iyo dadka ku xeel dheer arrimaha socdaalka, iyaga oo dhista shuraako la isku halleyn karo oo ay ku siinayaan taageero dhammaystiran.
Xulo wadanka Ogolaanshaha Shaqada
Wadamada ugu sareeya ee musharixiinta ay doonayaan
Tallaabada 1: Aqoonso baahiyaha Shaqsi / Qoys / Ganacsi.
Tallaabada 6: Xisaabaadka iyo talo bixinta canshuurta, haddii lagu dabaqi karo.
Waxaan kala shaqeynaa Musharixiinta iyo loo shaqeeyayaasha wadamada aan soo sheegnay:
Annagu ma taageerin mana siinno adeegyadeena hoos ku xusan noocyada (yada) shaqsiyaadka iyo / ama ganacsiyada: